> Resource > Video > iVI ma shaqaynta? Xaliyay
Ma heli karaa metadata la iVI? Halkan waa xalka. iVI waxaa loo isticmaalaa in lagu daro metadata in videos, laakiin mararka qaarkood waxa aan si fiican u shaqayn kara. Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa video ah oo horumarsan metadata Tagger in aynu aad si fudud oo si habsami leh ku dar iyo edit metadata. Just akhri maqaalka si dheeraad ah uga ogaato.
Marka ay timaado in a video metadata Tagger iyo editor, Wondershare Video Converter Ultimate u Mac ( version Windows sidoo kale avaliable) noqon doonaa dooqa koowaad. Waxaad u isticmaali kartaa in aad ku darto iyo edit metadata, sida agaasimaha, jilayaasha, comments, sharaxaad, iwm video Tani metadata Tagger ka raadin kartaa wixii macluumaad ah ee si toos ah metadata iyo dhigma metadata ah oo aad si fudud oo dhaqso videos. Waxaad ku dhameysan kartaa socodka hawsha oo idil ku qasabno yar.
Sida loo isticmaalo Tani Video metadata Tagger
1 geliyaan aad video
Tani video metadata Tagger kuu ogolaanaysaa inaad si toos ah jiidi oo hoos u video u galay. Sidoo kale waxaad riixi kartaa "+" badhanka si ay u dajiyaan aad video.
2 Calan qaab saarka video sax ah
Ka hor inta ku daray metadata in aad videos, aad u baahan tahay si ay u dejiyaan qaab video habboon. Waxaad sameyn kartaa qaab video sida qalab MOV, M4V, ama Apple. In ay leeg- tahay qaab wax soo saarka, waxaad ka arki kartaa, waxaa jira dhowr tabs. In tab Qalabka, fadlan dooro iPhone ama iPad. In tab Qaabka ah, oo kaliya ay doortaan MOV ama M4V.
Waxaad ka furan kartaa suuqa kala metadata ku daray adigoo gujinaya icon this . Oo markaas ka dibna ku qor aad filim ama TV show magacaygu halkaas ugu jiro. Markaas riix "baadh". Ka dib markii warbixin metadata waxaa kulan, fadlan guji "OK" oo u badbaadin doonaa. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel macluumaad metadata, kaliya si toos ah u beddelo.
Just ka dhacay button diinta ee si toos ah. Marka hawlaha qaab beddelidda la sameeyo, waxaad ka heli doontaa in aad video badaley macluumaad metadata ayaa synced in Lugood. Iyo video ayaa la kala soocaa si fiican sida uu sheegay category oo la aqoonsan yahay oo ay cover.
Wondershare Video Converter Ultimate U qalmaa inuu doorashada ugu fiican ee aad. Ma aha oo keliya oo awood u tagging metadata in videos, laakiin sidoo kale ha kartaa in aad loogu badalo video in qaab kasta oo aan khasaaro tayo leh. Sidee ku saabsan gubanaya DVD iyo tafatirka videos? Sure, codsigan si fudud waxa ay ka dhigi karaan. Mararka qaar waxaad u baahan kartaa inaad kala soo baxdo videos ka YouTube ama Dailymotion, kaliya isku day software this.